Dunhu rePalma muCabo Delgado kuMozambique riri kurwiswa nemagandanga vanopfurikidza mwero izvo zvaita kuti vanhu vakawanda vatize misha yavo.
Nhengo dzemubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica weSouthern Africa Development Community, SADC, dzinonzi dziri mubishi kuungamidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi.
Mutungamiri weBotswana VaMokgweetsi Masisi vakati nhengo dzeSADC dziri mubishi kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvaga zvikwanisiro zvichabatsira kumisa hondo iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique.
VaMasisi, avo vanova sachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa pamwe nekugadzikana kwekuchamhembe kweAfrica, reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, vakazivisa izvi vachitaura nevatori venhau panhandare yendege yeSir Seretse Khama International Airport muGaborone nezuro manheru vachibva kuMaputo kumusangano wekuzeya nezvedambudziko riri muMozambique.
Kunyange hazvo nyika nhanhatu dzinoumba sangano remuunganidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nedenda rashura mare reCOVID-19, VaMasisi vakaenderera mberi vachiti nyika idzi dzazvipira kubatsira Mozambique kuitira kuti hondo isazoyambukira kune dzimwe nyika dziri mudunhu iri.
VaMasisi vakati kuvambwa kwenzvimbo ichange iri muzinda wekudzivirira kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reSADC, ye Counter Terrorism Centre muchirungu kwakafanira kuitwa nechimbi chimbi.
Nhengo dzeSADC dzakaita chisungo chekuvamba nzvimbo ichatarisana nekurwisana nevanopfurikidza mwero iyo ichange iri muBotswana pamusangano weExtraordinary Ministerial Committee on Politics, Defense and Security Cooperation uyo vakaitirwa muBotswana muna 2015.
Chisungo ichi chakaitwa mushure mekuona kuti hondo dzinokonzerwa nevanopfurikidza mwero dzakanga dzonyanya kuitika mudunhu reSADC.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi reMozambique panyaya iyi sezvo mumiri wenyika iyi muBotswana, VaDomingos Fernandes vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo.
Asi nyanzwi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvemutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies, VaTafadzwa Matambo vaudza Studio7 kuti nyika dziri kusundwa kubatsira Mozambique sezvo dziri kutyira kuti hondo iri kunyika iyi ingatapukira kudzimwe nyika.
Hondo iyi, iyo yaita kuti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vatize misha yavo, yakatanga muna2017 apo chikwata cheve chidiki makumi matatu chakagura vanhu misoro pakamba yemapurisa muguta reMocimboa de Praia.